အကြင်နာနန်းတော်: ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ကောင်းကင်မေမေ / ၀ိုင်ဝိုင်း - ပြန်လာပါစိတ်ပူတယ်
အကြင်နာနန်းတော် ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
၁။ အသုံးဝင်သော ဆော့(ဖ်)၀ဲ များ
၂။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (ကွန်ပျူတာ၊ ပရိုဂရမ်၊ ဓာတ်ပုံ နှင့် ဒီဇိုင်း၊ အင်တာနက်၊ အင်ဂျင်နီယာ)
၃။ ဘာသာရေး၊ တရားတော်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ အသံဖိုင် နှင့် ဗီဒီယိုများ
၄။ ၀တ္ထု၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဟာသ စာအုပ်များ
၅။ တေးသီချင်းများ (မြန်မာ၊ နိုင်ငံခြား)
၆။ ရုပ်ရှင် နှင့် ဗီဒီယိုများ (မြန်မာ၊ နိုင်ငံခြား)
၇။ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့်အကြံပြုချက်များ
၈။ သတင်း နှင့် အထွေထွေဗဟုသုတများ
၁၀။ အလှအပ နှင့် ဖက်ရှင် ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နှင့် အကြံပြုချက်များ
၁၁။ အသုံးဝင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာများ
ကို မျှဝေပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
အကြင်နာနန်းတော် သို့ လာရောက်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဗဟုသုတ နှင့် နည်းပညာ တစ်ခုခုတော့ ရရှိသွားစေရပါမည်။
စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ရည်မှန်းချက်ရှိသူ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း (Community) တစ်ခု ဖန်တီးသွားရန် နှင့် မြန်မာလူငယ်များ ပိုမို တိုးတက်အောင်မြင်အောင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက် သွားကြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သီချင်းရပ်ချင်ရင် ဗီဒီယိုပေါ်မှာ Right Click-->Rewind. ဒေါင်းချင်ရင် သီချင်းအမည်ပေါ်မှာ Right Click, Save Link As ကိုနှိပ်ပါ။
ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ကောင်းကင်မေမေ / ၀ိုင်ဝိုင်း - ပြန်လာပါစိတ်ပူတယ်
aungminoo (guest): ကိုဧကရာဇ် ကျနော့်ကို ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ကောင်းကင်မေမေ သီချင်းနဲ့ ၀ိုင်ဝိုင်းဆိုထားတဲ့ ပြန်လာပါစိတ်ပူတယ်သီချင်း တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဧကရာဇ် : အကိုတောင်းထားတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေ။
ဒီပို့စ်လေးကို share လုပ်ရအောင် :
ပို့စ်ရေးသားသူ kg lay ရက်စွဲ Wednesday, November 16, 2011
နည်းပညာ ဖုန်းနှင့်ပတ်သတ်သမျှ facebook gtalk/gmail
စာရေးဆရာများ # # #
အဆိုတော်များ BigBag ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဘန်နီဖြိုး ရဲလေး အဆိုတော်အဖွဲ့လိုက်
ကဏ္ဍအလိုက်ရှာရန် # # #
တွင် စတင် ရုပ်လုံး
နှစ်သက်ရင် Like လုပ်ပေးပါ။
Flash သီချင်းများ စုစည်းမှု
လူတချို့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့ မရောက်နိုင်အောင် အလုပ်များကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူများအတွက်အကြင်နာနန်းတော် သို့လာရောက်လည်ပတ်စဉ် တရားတော်များ နာယူချင်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါက အဆင်ပြေစွာရယူနိုင်ရန် ဒီနေရာလေးတွင် စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်များမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆိုဒ်များမှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ http://www.dhammadownload.com/
၀ထ္ထုတို (6) English Section (3) music (18) ကဗျာများ (35) ကာတွန်းများ (8) ကလေးပုံများ (4) ကျန်းမာရေး (38) စာအုပ်စင် (33) ဆုတောင်းများ (4) တရားစာအုပ်များ (16) တရားတော်များး (16) နည်းပညာ (123) နည်းပညာမေး/ဖြေများ (40) နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ (5) နိုင်ငံခြားသီချင်းများ (32) ပန်းချီများ (5) ဖက်ရှင် (6) ဖက်ရှင်ကြည့်ရန် (1) ဗဟုသုတ (126) မြန်မာရုပ်ရှင်များ (12) မြန်မာသီချင်းများ (32) ဘာမသိညာမသိခေါင်းစဉ်မဲ့ (19) ဘာသာရေးအမေးအဖြေများ (18) ဘာသာရေးဆောင်းပါးများ (49) ဘုရားပုံတော်များ (8) ဘလော့ဂါ (26) ရှုခင်းပုံများ (3) လူမှုရေးအဖြေများ (20) သတင်းများ (155) ဟာသများ (32) အံဖွယ်ပုံလေးများ (7) အလှပုံလေးများ (16) အားကစား (7) အိမ်ရှင်မလေးဧကရီရဲ့လက်ရာ (6) အတွေးအမြင် (3) ကျေးဇူးတင်မိခြင်း (3) ဆော့ဝဲများ (222) တောင်းဆိုထားသောဆော့ဝဲများ (36) တောင်းထားသောရုပ်ရှင်များ (2) တောင်းထားသောသီချင်းများ (31) ဗေဒင်များ (22) အောင်မြင်ရေး (6)
ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ကောင်းကင်မေမေ / ၀ိုင်ဝိုင်း - ပြန်လ...
ဘလော့ဂါမှတ်စုလေးများ blog မှ NavBar (Top Navigation Bar) လေး ဖြုတ်ချင်ရင် ဘလော့(ဂ်) တွင် မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် ရေဒီယိုလေး ထည့်ရအောင် ဘလော့(ဂ်) တွင် flash song တင်နည်း blogger မှာ Facebook Comments ထည့်နည်း
နည်းပညာဆိုင်ရာဆိုဒ်များ လင်းလဲ့ဦး IT RESHARE SITE ကိုကျော်စွာငြိမ်း ကေပီသရီးနည်းပညာ saturngod ကိုမြတ် KG ကိုသားကြီး အိုင်တီခရီးသည် သတင်းစုံ ကောင်းမင်းထက် ကော့သောင်းသား mone-tine
ရုပ်ရှင်/သီချင်း/ဂိမ်းဆိုဒ်များ ထိန်လင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း game blogger burmeseclassic ဟိန်း ရွှေအိုး ရွှေဗီဒီယို
တရားဓမ္မဆိုင်ရာဆိုဒ်များ အရှင်အာစရ ချယ်ရီမြေ အရှင်ကောမလ DHAMMA GARDEN CENTRE ဓမ္မဂင်္ဂါ လူသားအားလုံးအတွက် အရှင်သိရိန္ဒ တောက်ပကြယ်စင် သိရီမင်္ဂလာ သီတဂူစတား ထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည် မျိုးချစ်သွေး မြရောင်နီ မဟူရာမင်း တရားတော်များ Dhamma Guardian ဦးကောဝိဒ
ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းဆိုဒ်များ မဟူရာမင်း ရွှေဇင်ဦး အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် ကိုဇော် ကိုပီတာ နှင်းနဲ့မာယာ ဟိန်းတင့်ဇော်သက်သန့်ချိုမြသွေးနီကောင်းကင်ကို အိမ်ကလေး ပေးဆပ်သူ ဘလော့ဂါတို့၏ ကဗျာရပ်ဝန်း ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ နေ၀သန်ရဲ့  အိုအေစစ် တောသူမလေး အိမ့်ချမ်းမြေ့ သားဆိုး သက်ဆုံးနှင်း ဇူးဇူး မိုးစက်ပွင့် နတ်ဆိုးလေး ခင်ဦးမေ ခိုင်မာလာအောင် ခိုင်နုငယ် စိမ်းပြာမြေ စက်တင်ဘာရဲ့ကောင်းကင် ခုနှစ်စင်ကြယ် ငယ်ဆူးအိမ် ညီလင်းဆက် ကိုကိုမောင် ကိုယ်တိုင်ရေးသမိုင်းကျမ်း
ဧကရာဇ် (akyinnarnantaw.org@gmail.com) PurpleSnake (drnyinyilwin72@gmail.com) တောင်ကြီးသားလေး... (soewinnaingporn@gmail.com) Ashin Acara (ven.acara@gmail.com) ထာဝရချစ်သူကောင်လေး (foreverloverkglay@gmail.com) ထာဝရချစ်သူကောင်မလေး (foreverloverkgmalay@gmail.com) ချိုဝတ်ရည် (chowutyee528@gmail.com)
အကြင်နာနန်းတော်. Powered by Blogger.